ဖူး စာ နှင့် ကံ ကြမ္မာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ဖူး စာ နှင့် ကံ ကြမ္မာ
ဖူး စာ နှင့် ကံ ကြမ္မာ
Posted by aye.kk on Jun 4, 2012 in My Dear Diary | 12 comments
ခင် ခင် ဆို သူ ၏ ဖူး စာ က ဦး ရာ တော့ မ ဟုတ် ပါ လေ…။
ခင် ခင် ဆို သူ က အ လွန် ချော ပါ သည် …..
ကံ အ ကြောင်း မ လှ ဆင်း ရဲ နုံ ချာ လှ သ ဖြင့် ၊ အ ရွယ် လေး ရောက် ခါ စ တွင် ၊ ထ မင်း ဆိုင် လေး တွင် စား ပွဲ ထိုး ဘ ၀ ဖြင့် ၊ မိ သား စု စား ၀တ် နေ ရေး အ တွက် ဖြေ ရှင်း ပေး ရ သူ ဖြစ် လေ သည်။
ထ မင်း ဆိုင် လေး တွင် စား ပွဲ ထိုး ၊ ဘ ၀ ဖြင့် နေ ထိုင် ရ မှု ကြောင့် ၊ ထိ က ပါး ရိ က ပါး လုပ် ချင် သူ က လည်း မ ရှား ပါ ပေ ။ တ ရက် တွင် သူ ၏ အ ချစ် ကို လှည့် ဖျား ညာ ယူ သူ နှင့် တိုး လေ သည် ။ မ ရှူ နိုင် မ ကယ် နိုင် ပါ ဘဲ ကိုယ် ၀န် ရ သော အ ခါ ၊ ထို လူ က ပစ် ပြေး ပါ တော့ သည်။
ခင် ခင် က ရ လာ သည့် ကိုယ် ၀န် ကို ၊ အ နှိပ် သည် လက် သ မား ဖြင့် ဖျက် ချ ရ တော့ သည်။ နောက် ပိုင်း တွင် တော့ ခင် ခင် က ကိုယ် ကျင့် တ ရား ပျက် ခါ လူ တ ကာ နှင့် ချေ ရှုပ် တော့ သည် ။
ကု သို လ် ကံ ကောင်း ချင် တော့ ၊ နောက် ထပ် မံ တွေ့တဲ့ သူ က ၊ ဒိတ် ဒိတ် ကြဲ လူ ကုံ ထံ ပ ညာ တတ် အ သိုင်း ၀ိုင်း ကြေး ရည် တတ် မိ သား စု ထဲ က ဖြစ် သည် ။
အင် ဂျင် နီ ယာ ဘွဲ့ ရ ထား ပြီး ၊ နာ မည် က ကို လူ မောင် ဟု ခေါ် ပါ သည် ။ ခင် ခင် စား ပွဲ ထိုး သည့် ထ မင်း ဆိုင် တွင် ၊ ထ မင်း လ ခ ပေး စား ယင်း နှင့် ၊ ခင် ခင် ကို မြင် တွေ့ပြီး လွန် စွာ နှစ် သက် သွား ခဲ့ ခြင်း ပင် ဖြစ် သည်။
အ ကြောင်း ကံ ကြမ္မာ ၊ ဖူး စာ ဆုံ လာ ချင် ပြန် တော့ ခင် ခင် က လည်း ၊ ကို လူ မောင် အား တွယ် တာ မြတ် နိုး ကာ တ ကယ် ချစ် ခင် စွဲ လမ်း သွား ခဲ့ ပါ သည်။ သူ့ဘ ၀ ကို လည်း အ တိ အ လင်း ပင် ၊ အ ဖြစ် မှန် တို့ အား မ ချွင်း မ ချန် ဖွင့် ဟ ၍ ကို လူ မောင် အား ထုတ် ဖော် ၍ ပြော ပြ ခဲ့ ရှာ ပါ သည်။
ကို လူ မောင် က လည်း ခင် ခင့် နောက် ကြောင်း ရာ ဇ ၀င် နှင့် တ ကွ အား လုံး စုံ စမ်း ထား ပြီး သား ၊ ဖြစ် နေ သည့် အ ပြင် ၊ ခင် ခင် က လေး ဘ ၀ က မြန် မာ့ တိုင်း ရင်း ဆေး ရက် ဆား ရောင်း သည့် အိမ် ၌ ရက် ဆား တ ဆုံ (၁၀) ပြား နှင့် ထောင်း ပြီး ၊ ၀မ်း စာ ရှာ ဖွေ စား သောက် ခဲ့ ရ သည့် ဘ ၀ အ ထိ ပါ ၊ သိ ရှိ ထား ခဲ့ ပါ သည်။
ခင် ခင် က လည်း မိ မိ ၏ ဖူး စာ နှင့် ကံ ကြမ္မာ အား ၊ မည် သို့ဖြစ် မည် နည်း ဟု သိ ချင် သည့် အ ပြင် ၊ ကို လူ မောင် ၏ အ ချစ် ကို စမ်း သပ် စစ် ဆေး သိ ချင် နေ ခဲ့ ၍ သာ ၊ အ ဖြစ် မှန် အား ဖွင့် ဟ ခဲ့ ပြီး အ ပျို ရည် ပျက် ခါ ၊ ကိုယ် ၀န် ဖျက် ချ သည် အ ထိ နှင့် နောက် ပိုင်း မ ထူး ဇတ် ခင်း ကာ ၊ ယော င်္ကျား များ အား စိတ် နာ မိ သည့် အ ပြင် ယော င်္ကျား လေး များ နှင့် အ ပျော် တွဲ ၍ ပ လူး ပ လဲ နေ ထိုင် မိ ခဲ့ ကြောင်း ၊ ကို လူ မောင် အား ပြော ပြ ခဲ့ ပါ တော့ သည်။
ကို လူ မောင် က လည်း သူ့အ ချစ် ကို လက် ခံ ပါ က ၊ လက် ခံ ပြီး သည့် အ ချိန် မှ စ ၍ သူ့အ ပေါ် သ စ္စာ ရှိ ရင် တော် ပြီ ဟု ပြော ဆို ခါ ၊ ခင် ခင် အား လက် ထပ် ခွင့် တောင်း ခံ ပြီး ၊ ခင် ခင် နေ ထိုင် သည့် တော မြို့ လေး သို့ ပင် ခိုး ပြေး ခဲ့ ပါ တော့ သည်။
ကို လူ မောင် မိ ဘ အ သိုင်း ၀ိုင်း က ၊ ကို လူ မောင် နှင့် ခင် ခင် အား တွေ့ ရာ သင်္ချိုင်း ဓား မ ဆိုင်း ဟု လိုက် လံ ရှာ ဖွေ ကာ ၊ နောက် ဆုံး တော့ ခြေ ရာ ခံ ခဲ့ နိုင် ပါ သည် ။ ကို လူ မောင် ၏ အစ် ကို ဖြစ် သူ ၊ ကို လူ အောင် က ညီ ဖြစ် သူ နေ ထိုင် ရာ အား စုံ စမ်း ယင်း ခင် ခင် နေ ထိုင် သည့် နေ ရာ နှင့် အိမ် ကို သိ ရှိ ပြီး ဆိုက် ဆိုက် မြိုက် မြိုက် ရောက် ရှိ လာ ပါ သည် ။
ခင် ခင် တို့မိ သား စု အား မြို့မျက် နှာ ဖုံး ၏ အိမ် မိ သား စု တို့က စောင့် ရှောက် ခြင်း ခံ ထား ရ သည့် အ ပြင် ၊ အ နီး ကပ် နေ ထိုင် နေ မှန်း သိ ရ သော အ ခါ ၊ ကို လူ အောင် မှာ မြို့မျက် နှာ ဖုံး သူ ဌေး ကြီး ၏ အိမ် တွင် လာ ရောက် တည်း ခို နေ ထိုင် ခဲ့ မိ သ ဖြင့် ၊ အိမ် ရှင် သူ ဌေး ကြီး ကို လွန် စွာ အား တုံ့ အား နာ ဖြစ် မိ ပြီး လျှင် ၊ သူ ဌေး ကြီး အား လည်း ညီ ဖြစ် သူ လုပ် ပုံ သည် ၊ မိ ဘ များ ၏ မျက် နှာ ကို အိုး မဲ သုတ် သ လို ဖြစ် နေ ကြောင်း နှင့် ၊ ခင် ခင် အ ကြောင်း လည်း တ ချို့ တ ၀က် အား သိ ထား သ ဖြင့် ၊ မိ ဘ များ မှာ မည် သည့် နည်း နှင့် မျှ သ ဘော တူ ညီ လက် ခံ မှု ရှိ မှာ မ ဟု တ် သ ဖြင့် လိုက် လာ မိ ခြင်း ဖြစ် သည် ဟု ပြော ဆို ရှင်း ပြ ပါ သည်။
သူ ဌေး ကြီး အိမ် တွင် ၊ တ ည အိပ် နှစ် ရက် ခန့်မျှ တည်း ခို နေ ထိုင် ယင်း ၊ ညီ ဖြစ် သူ တို့အား ခွဲ ပစ် မည့် အ ရေး ထက် ၊ မြို့မျက် နှာ ဖုံး သူ ဌေး ကြီး ၏ သ္မီး အ လှ ပ ဂေး ဖြစ် သူ ၊ မ ရွှေ ၀တ် မှုံ အား မြင် မြင် ချင်း ပင် ၊ တန်း တန်း စွဲ ချစ် ခင် နှစ် သက် သွား ခဲ့ မိ သ ဖြင့် ၊ အ ချစ် ဆို သည့် ခံ စား မှု အ ရာ အား ၊ ကိုယ် ချင်း စာ တ ရား ထား မြင် တတ် သွား ခဲ့ မိ ပါ ကြောင်း အား ဖွင့် ဟ ပြော ကြား ခဲ့ ပါ တော့ သည်။
ညီ ၏ ချစ် ခြင်း မေ တ္တာ တ ရား အား ၊ မ ခွဲ လို တော့ သည့် အ ပြင် မိ ဘ တို့အား ဖျောင်း ဖျ နိုင် ရန် ပြန် လည် ပြော ဆို ပြ မည် ဖြစ် ပြီး ၊ နှစ် အ နည်း ငယ် အ ချိန် ယူ ပြီး ပါ က ၊ သူ ဌေး ကြီး ၏ သ္မီး ဖြစ် သူ အား လာ ရောက် တောင်း ရန်း ယူ လို ပါ သည် ဟု ခွင့် ပန် ကြား ခဲ့ ခါ ၊ ပြန် သွား ခဲ့ ပါ သည် ။
သူ့ကိုယ် သူ လည်း ညီ ၏ ချစ် ခြင်း မေ တ္တာ အား လာ ခွဲ သည် မှာ ၊ မှန် သော် လည်း သူ ကိုယ် ၌ က ပင် သူ ဌေး ကြီး ၏ သ္မီး ရွှေ ၀တ် မှုံ အား စွဲ လမ်း စိတ် ဖြစ် ရ ခါ ၊ မောင် ကြီး မ ပြန် နိုင် ဖြစ် ရ သည် ဟု သူ ဌေး ကြီး အား ရယ် မော စွာ ဖြင့် ပြော ပြ မိ လေ သည် ။
သူ ဌေး ကြီး မှ လည်း ခင် ခင် နှင့် ကို လူ မောင် တို့၏ ဖြစ် ပြီး သား ကိစ္စ များ အား လည်း ၊ ဖျောင်း ဖျ ပြော ဆို ပြ ခဲ့ ရာ ကို လူ အောင် လည်း စိတ် ကျေ နပ် စ ရာ ရ ရှိ သ လို ဖြစ် သွား ပါ သည် ။ ခင် ခင် ၏ မိ ဘ များ က လည်း ၊ သူ ဌေး ကြီး အား ခင် ခင် တို့ကိစ္စ နှင့် ပတ် သက် ၍ လွန် စွာ ပင် ကျေး ဇူး တင် မ ဆုံး ဖြစ် သွား ခဲ့ ရ ပါ တော့ သည်။
ကို လူ မောင် ၏ မိ ဘ များ က တော့ ၊ ကို လူ မောင် အား အ မွှေ ပြတ် စွန့်လွှတ် သည့် ကိစ္စ အား ၊ သ တင်း စာ ထဲ တွင် အ တိ အ လင်း ထည့် ခါ ကြေ ငှာ လိုက် ပါ တော့ သည်။ သူ ဌေး ကြီး က တော့ ကို လူ မောင် ဘက် က ၊ မိ ဘ တွေ အ မွှေ ပြတ် စွန့်လွှတ် ကြောင်း အ တိ အ လင်း သိ ရ ပြီး သည့် နောက် ပိုင်း တွင် ၊ ဒုက္ခ ရောက် နေ သည် ကို ကြား သိ ရ သ ဖြင့် ၊ သ္မီး ဖြစ် သူ ရွှေ ၀တ် မှုံ နှင့် ဘုတ် ဆုံ တို့ နှစ် ယောက် အား ခေါ် ကာ ခင် ခင် တိ်ု့လင် မ ယား ထံ သွား ရောက် ၍ အား ပေး စ ကား ပြော ကြား ပြီး ၊ စား သောက် စ ရာ ၊ ငွေ စ တို့အား ပေး ကမ်း ထောက် ပံ့ မှု့ ပြု လုပ် ခဲ့ ပေး ပါ သည် ။
ထို သို့ ထောက် ပံ့ မှု ပြု မှု ပြု လုပ် ခဲ့ စဉ် ၊ သွား ရောက် ခဲ့ တုံး အ ခါ က တော့ ၊ ခင် ခင် ၏ ဇာ တိ နေ ထိုင် ရာ ၊ မြို့မျက် နှာ ဖုံး သူ ဌေး ကြီး ၏ သ္မီး ဖြစ် သူ ရွှေ ၀တ် မှုံ မှာ ၊ ကိုင် ရို လ က္ခ ဏာ ပ ညာ ရပ် အား ၀ါ သ နာ ပါ ကာ ၊ လိုက် စား နေ သူ တ ဦး ဖြစ် ၍ ၊ အ ဖေ ဖြစ် သူ နှင့် အ တူ ခင် ခင် ထံ ရောက် တုံး အ ခိုက် အ တန့် တွင်း ၊ ခင် ခင် ၏ လ က္ခ ဏာ အား တောင်း ယူ ကြည့် လျှက် စစ် ဆေး ပေး ခဲ့ ဘူး ပါ သည် ။
ခင် ခင် ၏ လက် ဖ၀ါး ပြင် ဘယ် လက် ဖ ၀ါး ပြင် နှင့် ညာ လက် ဖ ၀ါး ပြင် တို့ အား ၊ သေ ချာ စွာ လက် ဖြင့် ကိုင် တွယ် ကြည့် ရှု စစ် ဆေး ပြီး ၊ အား ကောင်း သည့် မှန် ဘီ လူး ဖြင့် ကြည့် မြင် လျှက် က ၊ ခင် ခင် မှာ ဧ ကန် အ မှန် ချမ်း သာ ကြီး ပွား လာ မည့် သူ တ ယောက် ဖြစ် ကြောင်း ဟော ကိန်း ထုတ် ခဲ့ ပါ သည် ။ (ခင် ခင် က မ ယုံ နိုင် ခဲ့ ပါ )
ခင် ခင် မှာ ယ ခု အ ချိန် ၌ ၊ သူ ဌေး ကြီး မိ သား စု တို့မ ရောက် လာ ခဲ့ ပါ လျှင် မ နက် စား စ ရာ ဆန် အိုးထဲ မှာ ဆန် တ စေ့ မျှ ပင် ၊ မူး လို့ တောင် ရှူ စ ရာ မ ရှိ ပါ ၊ ကြီး သာ သာ နား ကပ် လေး တ ရံ မှာ ၊ တ ဖက် ပေါင် ထား ပြီး သုံး နေ ရ သည့် အ ပြင် ၊ နောက် တ ဖက် အား ပေါင် ရန် ချွတ် နေ စဉ် ၊ အိမ် ရှေ့ဧည့် သည် ရောက် သံ ကြား သ ဖြင့် ၊ ထွက် မ တွေ့ရဲ သည့် အ ပြင် ၊ ရေ အိမ် ထဲ ၀င် ပုန်း နေ မိ ပြီး အ ကြွေး လာ တောင်း သူ ဟု ထင် မိ ခါ ၊ ကြောက် စိတ် တုန် လျက် က ပင် နား စွင့် မိ စဉ် ၊ သူ ဌေး ကြီး ၏ အ သံ နှင့် အ လွန် တူ လာ သ ဖြင့် ၊ မ ရဲ တ ရဲ ထွက် လာ ကြည့် မိ တော့ မှ ပင် ၊ အ လွန် ပျော် ရွှင် သွား ရ သည် ဟု အား ရ ပါး ရ ပြော ပြ ရှာ ပါ တော့ သည် ။
သူ ဌေး ကြီး က လည်း နာ မည် ခေါ် ရာ အ တော် တန် ကြာ သည် အ ထိ မ ထူး ၊ အိမ် များ မှား လား ဟု သံ သ ယ ဖြစ် သွား ရ ကြောင်း ၊ အ လုပ် သ မား တန်း လျှား ဖြစ် ပြီး ၊ ဘေး အိမ် က လည်း ဟုတ် မှန် ကြောင်း သာ တွင် တွင် ဆို နေ သ ဖြင့် ၊ အ သံ ထူး သံ မ ကြား ရ သ ဖြင့် ၊ ငါ က လှည့် ပြန် ရ ကောင်း မ လား စဉ်း စား စဉ် ၊ နင် ထွက် လာ သ ဖြင့် ကံ ကောင်း သည် ဟု ပြော ဆို ကာ ဂ ရု ဏာ သက် လျှက် က ၊ ချက် ခြင်း ပင် ဆန် တ အိပ် ၀ယ် ထည့် ရန် ငွေ စ ပေး လျှက် ခင် ခင် အား ခိုင်း လိုက် ပါ သည် ။
အ ကြွေး တောင်း သူ တွေ့က လည်း အိမ် သို့သာ လာ ခိုင်း ပြီး ၊ ဆပ် ပေး မည် ဟု ပြော ကြား ခါ ၊ တ ဆက် တည်း ပင် ခင် ခင် အား တ ပါ တည်း မှာ လိုက် ပါ တော့ သည် ။
ခင် ခင် က သူ ၏ လ က္ခ ဏာ အား ဟော သည့် အ တိုင်း ဟုတ် ပါ့ မလား ဟု အ ထပ် ထပ် ပင် ၊ မ ယုံ ကြည် နိုင် လျှက် ရွှေ ၀တ် မှုံ အား မေး ပါ တော့ သည် ။ ရွှေ ၀တ် မှုံ က လည်း ခင် ခင် ၏ လ က္ခ ဏာ အ ရ ၊ လက် ဖ ၀ါး ရေ ဇာ မှာ နူး ညံ့ နေ ကြောင်း ၊ နူး ညံ့ နေ သည့် အ တွက် မိ ဘ တို့မှ ဆင်း ရဲ သည် မှာ မှန် ကန် သော် လည်း ၊ မိ မိ လူ ဖြစ် ရ သည့် ဘ ၀ ၌ ပင် ၊ အ ချိန် မ ရွေး ကု သိုလ် ကံ အ ကြောင်း ထောက် မ နိုင် သ ဖြင့် ၊ ပျော် ရွှင် စ ရာ များ ခံ စား နိုင် မည် မှာ ဧ ကန် အ မှန် ပင် ဖြစ် ကြောင်း ၊ ကံ ကြမ္မာ လမ်း ကြောင်း မှာ တ နင်း လာ ဂြိုလ် ခုံ က တက် နေ သည့် အ ပြင် ၊ တွဲ ဘက် လမ်း ကြောင်း က ဘေး မှ ယှဉ် တက် သွား ပြီး ကံ ကြမ္မာ လမ်း ကြောင်း နှင့် တ ပေါင်း တည်း ပူး သွား ကာ ၊ စ နေ ဂြိုလ် ခုံ ထိ တက် သွား ကြောင်း ၊ မိ မိ ၏ အ မှန် တ ကယ် ချစ် မြတ် နိုး သူ နှင့် ဖူး စာ ဆုံ ပြီး ၊ မိ မိ က ကောင်း မွန် သည့် ၊ ပါ ရ မီ ဖြည့် ဘက် တ ဦး အ နေ ဖြင့် ရပ် တည် ထား ကြောင်း ၊ ဖူး စာ နှင့် ကံ ကြမ္မာ အ ရ ချမ်း သာ ရ မည် ဖြစ် ကြောင်း ပြော ပြ ပါ သည် ။
ခင် ခင် ၏ ကံ ကြမ္မာ လမ်း ကြောင်း တွင် အ င်္ဂါ လွင် ပြင် အ တွင်း ၌ ကန့်လန့် ဖြတ် မျဉ်း ဖြောင့် တို( အ ဖျက် ) ဖြတ် ထား သ ဖြင့် ကြီး မား သည့် အ ရှက် ဂုဏ် သိ က္ခာ ၊ အ ထိ ခိုက် ခံ ရ လျှက် ကံ ကြမ္မာ ၀ဋ် ကြွေး ပါ သူ ဖြစ် ကြောင်း ၊ အ သက် လမ်း ကြောင်း အ စ ပိုင်း က အ တက် လမ်း ကြောင်း က ကောင်း မွန် ဖြောင့် တန်း လျှက် ကြာ သာ ပ တေး ဂြိုလ် ခုံ ထိ သွား နေ သည့် အ ပြင် ၊ အ သက် လမ်း ကြောင်း အ လယ် လောက် မှ တက် သွား သည့် အ တက် လမ်း ကြောင်း က လည်း ၊ စ နေ ဂြိုလ် ခုံ ထိ ကောင်း မွန် ဖြောင့် တန်း လျှက် တက် နေ သ ဖြင့် ၊ မိ မိ ကိုယ် ပိုင် ကြိုး စား ရှာ ဖွေ မှု တို့ဖြင့် ၊ အိမ် ခြံ မြေ တိုက် တာ ၊ ယာဉ် (ကား)များ ပိုင် ဆိုင် ရ မည် ဖြစ် ကြောင်း ၊ ယော က္ခ မ အ မွေ က မျှော် လင့် ရန် မ ရှိ ကြောင်း ၊ ရ မည် လည်း မ ဟု တ် ကြောင်း ၊ စ နေ ဂြိုလ် ခုံ မှာ အား ပျော့ နေ ကြောင်း ၊ စ နေ ခါး စီး လည်း အ နည်း ငယ် မျှ တွေ့မြင် ရ သ ဖြင့် ဘ ၀ နေ ၀င် ဆည်း ဆာ အ ရွယ် အ ချိန် တွင် ၊ လွန် စွာ ပင် ကု သို လ် ကံ ပြန် နိမ့် ပါး နေ သည် ကို တွေ့ မြင် နေ ရ ကြောင်း ၊ အ ထူး သ တိ ထား ပါ ရန် ခင် ခင် အား ပြော ပြ ခဲ့ ပါ သည်။
တစ် ချိန် တွင် ခင့် ခင့် အ မျိုး သား မှာ ၊ သူ ၏ ဆွေ မျိုး အ သိုင်း ၀ိုင်း ကြား ခင် ခင် အား မျက် နှာ မ ငယ် အောင် ထား ရန် ဟု ဆို ကာ ၊ သ င်္ဘော သား အ လုပ် အား ၀င် လျှောက် ပြီး ၊ သ င်္ဘော သား အ လုပ် ရ ခါ နိုင် ငံ ခြား သ င်္ဘော လိုင်း တက် ခွင့် ရ သွား ခဲ့ ပါ သည် ။ ခင် ခင် မှာ လည်း ရန် ကုန် သို့ ပြောင်း ရွေ့ နေ ထိုင် ရင်း ဖြင့် ပင် ၊ ခင် ပွန်း ဖြစ် သူ ရှာ သော ငွေ အား ချွေ တာ စု ဆောင်း ပြီး လျှင် ၊ ပွဲ စား ၊ အ ရောင်း အ ၀ယ် ၊ လုပ် ငန်း များ အား ကြိုး စား လုပ် ကိုင် လာ ခဲ့ ရာ တ စ ထက် တ စ တိုး တက် ကြီး ပွား ကာ ချမ်း သာ လာ ခဲ့ ပါ သည်။
ယ ခု အ ခါ မှာ တော့ ခင် ခင် လည်း အို မင်း ရင့် ရော် ၍ ၊ ဇ ရာ တန်း ၀င် ရောက် လာ သော အ ခါ တွင် ၊ သား သ္မီး ကံ မ ကောင်း သ ဖြင့် ကု သိုလ် ကံ ကြမ္မာ ပြန် နိမ့် ပါး သွား ပါ သည် ။ အ သက် လည်း (၇၀)တန်း ၀င် သွား ခဲ့ ပြီ ဖြစ် ပါ သည်။ စ နေ ဂြိုလ် ခုံ လျော့ ပါး ခြင်း နှင့် စ နေ ခါး စီး တို့က သား သ္မီး ကု သို လ် ကံ အ ကျိုး ခံ စား ခွင့် နည်း ပါး ကာ ကံ မ ကောင်း နိုင် ပါ ၊ ခင် ခင် က လည်း သား သ္မီး နှင့် ပတ် သက် လာ ပါ က ယုံ ကြည် ကာ အ လို တွယ် တာ လိုက် လွန်း ခဲ့ ၍ လည်း ဖြစ် ပါ သည်။ စ နေ ခါး စီး က ဆိုး ကျိုး ကို သာ ပေး ပါ သည် ။
ဖူး စာ နှင့် ကံ ကြမ္မာ ကား ဆန်း ကျယ် လှ ပါ သည် ။ ဖူး စာ က ဦး ရာ မ ဟုတ် ခဲ့ ပါ သော် လည်း ၊ ခင် ခင် အ တွက် က တော့ ၊ ဖူး စာ နှင့် ကံ ကြမ္မာ က ချမ်း သာ ရာ အ ကြောင်း တ ရား အ မှန် ပင် ဖြစ် ခဲ့ ပါ လေ တော့ သ တည်း ။။
လက္ခဏာ ဗေဒင်ကို ဥာဏ်မမီလို့ နားမလည်ပေမယ့် အခုလို ရေးတာလေးတွေကိုတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်။
ကြောင်ကြီး လူဖြစ်နောက်ကျတာသဗျာ… နို့မို့ရင် သူဌေးကြီးသမီး အလှပဂေး ရွှေဝတ်မှုံဂလေးနဲ့ တွေ့မှာ..။ အဂုဒေါ့ ဝေးဂျဗီ…။ သူ့မှာ သမီးမရှိဘူးလား..။ သူဌေးကြီးသမီးမရလည်း သူဌေးမကြီးသမီးယူမယ်ဗျာ…။
ဖူးစာက ဦးရာတော့ မဟုတ် ဆိုတော့
ကျုပ်တို့ ဦးပါများ ဖြစ်နေမလားလို့
ဖူးစာဆိုတာ ဦးရာလူမဟုတ်တာတော့သေချာပါတယ်။ ဖူးစာဆိုတာမွေးကတဲကသတ်မှတ်ထားတာနဲ့တူပါ တယ်နော်အမအေး။
အန်တီအေးရေ … စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် …. ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့လက်ဖ၀ါးပြင်ပေါ်က အရေးကြောင်းတွေကနေ … နိမိတ်ဖတ်ပြီး ၊ သူ့ကံကြမ္မာနဲ့ သက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာ ….. တကယ့်ကို ဆန်းကြယ်မှု တစ်ခုပါပဲ ………. ။
စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ အန်တီအေးရယ်။ နောက်ဇာတ်လမ်းလေးတွေလည်း ဆက်ပါအုန်းနော်။
အတွေ့ အကြုံယူအဲဒါနဲ့ ပဲအပျော်တန်းအဆင့်သာသာလောက်နားလည်လာခဲ့တာပေါ့နော်။
ကျမရဲ့ အစ်မကသူ့ ကိုပြောတယ်သေချင်လောက်တဲ့အခက်ခဲကြုံပြီးမှ၊ဘ၀ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေး
ဖူးစာရွာလည်ပြီး ဘော်ဘီစော်ခါလေးနဲ့နှစ်ပါးသွားရပေဦးမည်ပေါ့ဗျား..
ကံကြမ္မာက သတ်မှတ်ပီးသားလို့ ထင်ပါတယ်နော်…
ဖူးစာပါရင် ရွာလည်ပီးတောင် ညားသတဲ့ ..
ရွာထဲမှာတော့ လည်လိုက်ဦးမယ် ..